Fidirana ho mpikamban’ny CENI Kandida 26 no efa manana solontena
Andry Rajoelina Misy manipy hoditr’akondro
Tena nanome sary ratsy ary nanimba an’i Hery Rajaonarimampianina ireo olona nanodidina azy (namana, mpanolontsaina, minisitra, depiote, mpiasam-panjakana ambony,…). Telo volana nitantanana ny firenena ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina, fa toa efa tratran’io toe-javatra io sahady. Misy ireo akaiky azy tsikaritra fa efa manao fanararaotam-pahefana ary tena manambany olona, fa izy ireo izao no eo amin’ny fahefana. Vao nitondra herinandro vitsy dia toa efa nisy nisoloky hoe iraky ny filoha hanao hanao ny IEM.
Fifidianana solombavambahoaka Ahiana hihamafy ny hosoka sy hala-bato…
Manodidina ny 200 000 ny anarana niverimberina efa nodiovina tao anatin’ny lisi-pifidianana taorian’ny fifidianana filoham-pirenena, raha ny nambaran’ny teo anivon’ny CENI. Mbola nisy an’io 200 000 izany tamin’ny fifidianana filoha, izany hoe lisi-pifidianana tsy araka ny tokony ho izy sy azo nanaovana hosoka tsara no nampiasaina. Ny fanalana ireo anarana niverina no ambara mazava ho azy fa tsy nampitombo betsaka firy ny fitomboan’ny isan’ny mpifidy zara raha nisy 0,83% taorian’ny fisokafan’ny lisitra ny volana desambra, izay nikatona vonjimaika tamin’ny 15 febroary, ary ny 15 mey izany hoe: 12 andro aorian’ny fifidianana solombavambahoaka.
SeFaFi “Solombavambahoaka, inona marina no ilana azy ?”
Namoaka fanambarana ny Sehatra Fanaraha-Maso Ny Fiainam-Pirenena (SEFAFI) mahakasika ny anton`ny ilana solombavambahoaka. Amin’ny 27 mey ho avy izao, ny olom-pirenena dia hifidy depiote 151 amin’ny kandidà 803 samy hafa. Ny and. 68 ao amin’ny Lalàm-panorenana dia milaza fa « Ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona no mandrafitra ny Antenimiera. Izy no mandany ny lalàna sy manara-maso ny asan’ny governemanta ary ny fanaovana tombana ny politikam-panjakana ».
Fitantanana ny firenena Be loatra ny kitoatoa !
Matoa voasokajy ao anatin’ny firenena dimy mahantra indrindra eto ambonin’ny tany ny firenena dia misy zavatra tsy manjary ao, indrindra fa ny fomba fitantanana ny firenena. Mahantra ny 90% mahery amin’ny Malagasy, saingy tsy tokony hohararaotina amin’izany sy hatao tompon-trano mihono satria tsy an’ny mpitondra irery ity firenena ity. Sesilany ny kitoatoa sy ny kimaizimaizina ankehitriny.
Ravalomanana sy ny TIM Maro ireo mbola mahatoky azy
Tamin’ny fomba makotrokotroka no nandraisan’ny vahoakan’i Betafo an’i Marc Ravalomanana, izay tonga tany an-toerana omaly. Tonga tany an-toerana nanolotra sy nampahafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny kandida atolotry ny TIMK25 dia Razafindrakoto William José sy ny ekipany ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako I Madagasikara. Vonona ny hiady ho an'ny tombontsoan'ny aty amin'ny faritra eny amin'ny antenimieram-pirenena izy.
Minisitry ny atitany Hanambitamby ben` ny tanàna ?
Hampivory ireo ben` ny tanàna ao Moramanga, Brickaville, Toamasina I sy II, ary Fenoarivo Atsinanana ny minisitry ny Atitany, Tianarivelo Razafimahefa, amin` ity herinandro ity. Delegasionina mahery ny telopolo no hanaraka azy amin`io diany io. Maro ireo lohahevitra ho dinihana mandritra izany fivoriana izany toy ny resaka volan` Ambatovy. Misy kaominina misitraka ny “ristourne” nefa be loatra ny fepetra arahina eo anivon`ny Ministeran` ny vola ka misy tsy mahazo ny sasany.
Kandida Alain Ratsimbazafy -Atsimondrano Efa nahazo fiofanana manokana
Tokana ihany ny kandida solombavambahoaka hatolotry ny antoko Tiako I Madagasikara ho an’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano dia i Alain Ratsimbazafy, izay efa Ben’ny tanànan’Ambohijanaka
Nanatanteraka fivoriambe voalohany omaly ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena Misahana ny Fifidianana (CENI) amin’ny endriny vaovao,
ikambanan’ny Birao maharitra sy ny Birao tsy maharitra dia ny solontenan’ireo kandida hifaninana amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Miisa 7 ireo solontena maharitra ireo ary hiampy 36, raha samy mandefa ny solontenany avy ireo kandida. Natao io mba hanarahana andininy faha-30n’ny lalàna laharana faha 2015–020 mikasika ny rafi-pirenena mahaleotena miandraikitra ny fandaminana sy ny fitantanana ny raharaham-pifidianana. Tao anatin’izany fivoriana izany ary no nanambara ny Filohan’ny CENI, Hery Rakotomanana fa « midika fahavononana sy hampangarahara ny zotram-pifidianana eto Madagasikara ary hampitombo vaika ny fanatanterahana ny fifidianana ho avy ny fahatongavan’ireo solontenan’ny kandida ireo izay hiray lalana amin’ny CENI ao anatin’ny fitohizan’ny zotram-pifidianana ». Marihina fa 26 amin’ireo kandida 36 aloha hatreto no efa nanolotra ny solontenany. Hanara-maso ny fitondràna ny fifidianana, hanolo-kevitra ary hanazava amin’ny kandida tsirairay izay soloany tena no andraikitra apetraka amin’izy ireo. Nampahafantarina nandritra ny fivoriana ny mahakasika ny tetiandro mifehy ny fizotry ny fifidianana ary novelabelarina ihany koa ny asa efa vita sy ny asa miandry. Andrasana raha hitondra filaminana sy hampisinda ny karazana ahiahy izao dingana izao.